ONIVERSITE GSI: Manampy ny mpianatra amin’ny alalan’ny vatsim-pianarana. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE ONIVERSITE GSI: Manampy ny mpianatra amin’ny alalan’ny vatsim-pianarana.
By Nirinasept 06, 2017, 19:26 0
Efa manaraka ny rafi-pampianarana ny onivesrite GSI. Manan-kery amin’ny lalam-piofanana azo rantovina ao amin’ny trano vaovao misy azy eny Analakely izany. Mampahafantatra bebe kokoa ny momba ity tolotra ity ho an’ny mpianatra manana ny diplaoma bakalorea ny oniveriste mandritra ny “Salon des Études Supérieures”, karakarain’ny Mada Jeune. Manomboka rahampitso 07 ary hifarana ny 08 Septambra 2017 ny hetsika.
Anisany manampy ny mpianatra amin’ny alalan’ny vatsim-pianarana ny oniversite. Lalam-piofanana maro ihany koa no azo hanohizana ny fianarana ambaratonga ambony. “Mampiavaka ny GSI ny fananana lalam-piofanana ahitana “double formation” izay ahafahana manana fahalalana samihafa kanefa mifampiankina”, hoy ny Filohan’ny GSI, Geremioh RANDRIANAIVO.
Previous PostUCTU-FTAR: Mitaky ny hanafoanana ny fanomezana ny OMAVET ny fanaovana “contre-visite”. Next PostONIVERSITE HPI-MASCA: Tsy miandry fahavitan’ny taom-pianarana vao manao “stage”.